Inona no tokony hatao amin'ny zazavavy fahavaratra
Ny tokony hatao amin'ny fahavaratra
Poster 12.07.2018 24.07.2018 interesnenkoe, Красота, lamaody
Ny fahavaratra dia fotoana tokana ahafahanao manao akanjo kely farafahakeliny, mamela ny vatanao hiaina. Na dia eo aza anefa izany toe-javatra izany, maro ireo vehivavy no mahavita manimba ny endriny amin'ny zavatra tsy avy amin'ny lamaody, fa lasa antitraine. Efa tapitra ny antsasak'alina, ary eny an-dalambe Azonao atao ny mihaona amin'ireo vehivavy izay mbola mihira ny modely 2007-2010. Noho izany dia toa zokiny kokoa noho ny taonany izy ireo.
Ny Fashion dia mihetsiketsika, saingy misy zavatra izay efa saro-pady ny mametraka any amin'ny toerana iray amin'ity vanim-potoana ity. fanontana "Tsotra!" Lazao aminao izay zavatra ilainao hialana amin'ny faritry ny talantalana. Indraindray amin'ny stylish sy sary fahavaratra fahavaratra Ampy ny manadio ny efitrano fa tsy mividy akanjo vaovao.
Kely fohy tsy dia mafana loatra tsy lamaody Efa tamin'ny 5 taona lasa izay. Mitafy zatovovavy izy ireo, ary manan-danja amin'ny vehivavy rehetra. Ity modely ity dia manome ny tsy fahalavorariana rehetra ao amin'ilay sary ary matetika dia manjavozavo. Tsara kokoa ny manao akanjo maimai-poana amin'ny tolo-bidy iray - kanto ary tsy mafana. Ankoatr'izany, afaka miara-miasa tsara izy ireo tsy amin'ny T-shirts, fa amin'ny lamosina ihany koa.
Ireo akanjo tsara tarehy sy akanjo mangarahara 2 taona lasa izay dia tao anatin'ny fandalinana rehetra. Saingy raha oharina amin'ny tambatra an-dalan'ny sary miaraka amin'ireny zavatra ireny, amin'ny 2018 dia nivadika ho fanoherana ny fironana izy ireo. Noho izany dia tonga ny fotoana handraisana ireo zavatra vita amin'ny landihazo na lambam-pandehanana, izay manintona ambony ary mamela ny vatany hiaina.
Ankoatra ireo fehikibo fohy avy ao am-patana dia ny manaisotra ny jeans, izay misy lavaka kokoa noho ny lamba. Izany no taonjato farany. Afaka ampiasainao amim-pilaminana ireny mba handeha an-tongotra any amin'ny firenena, saingy tsy mety amin'ny fiainana andavanandro. Vitsy dia vitsy ny fanasan-dabozia, saingy ny lavaka sy ny fery eo amin'ny lohalika dia efa nilentika ny lasa. Efa tamin'ny taona 3-taona tamin'ny alàlan'ny akanjo simenim-pahefana maimaimpoana maimaim-poana no nopetahana tamin'ny fitongilanana.
Blouses miaraka amin'ny soroka misokatra
Ny kanto sy ny tafo miaraka amin'ny soroka misokatra, vita amin'ny fanahin'ny tanàna Frantsay, koa, izao no fotoana hanafoanana izany. Fialam-boly izany, saingy ny andro manetrik'izany zavatra kely izany dia lasa. Izy ireo dia mety tsara foana eny amoron-dranomasina, fa ho an'ny sary an-tanan-dehibe mampiavaka ity vanim-potoana ity dia tsy mety. Ny zavatra iray hafa dia ny mason-tsivana sy ny tampony amin'ny famafazana asymmetrika, ohatra, eo amin'ny soroka anankiray.
Ny endriky ny endrika akanjo sy ny lantihy amin'ny endriky ny kilalao dia niditra tao anatin'io lisitra io. Roa taona dia voageja sy ampy. Tsy ilaina ny mametraka tops amin'ny atlasa na velorano miaraka amin'ny dantelina amin'ny decollete. Maro ireo zavatra fototra izay hisolo azy tsara. Raha tsy azonao alaina sary an-tsaina ny sarinao tsy misy pensilihazo pensilihazo sy top ambony iray, dia misafidiana sehatra (satin) tsy misy kofehy sy tsipika, izay manaitra ny pioama.
Raha mialoha ny handravahana ireo firavaka ireo, ankehitriny dia tsy ampy fitaovana fotsiny izany. Nandritra ny taona maromaro dia nanampy azy ireo tamin'ny lisitry ny antitrends ny mpanakanto rehetra, fa ny vehivavy dia mbola mividy sy manao azy ireo. Raha te hanasongadina ny tendany ianao, dia manefà sofina lava lava, ary raha tianao ny hijery ny fikarakarana, dia iray.
Tsy misy kiraro intsony izay hamela sy hampihombo ny endriky ny vehivavy toy ny vehivavy Vietnamiana. Any amoron-dranomasina na any anaty dobo filomanosana. Saingy tsy voatery mandehandeha manodidina ny tanàna izy ireo. Amin'izao fotoana izao any amin'ny lantotra modely amin'ny modely samihafa, mba hahafahanao mifidy ho an'ny tsirony rehetra.
Mafaitra ny lamaody. Misy safidy roa: na manaraka ny fironana rehetra ianao ary mampifanaraka ny fikarakaranao ny fepetra amin'ny fotoana, na misafidy ireo zavatra fototra tsotra izay azonao anaovana 5-7 mandritra ny taona maro ary tsy hieritreritra izany. Saingy ny zava-dehibe dia ny mitafy zavatra izay manantitrantitra ny fahamendrehanao amin'ny fomba tsara, mifanaraka amin'ny fomba fiainanao ary mamela anao hahatsapa ho mahazo aina.
← Infografika: inona no tokony ho fantatrao momba ny ankizy amin'ny 2 ka hatramin'ny 7 taona
Tena mahasoa ny kanelina ho an'ny lehilahy →
Sokajy Select tenyVideo (45)Horoscope (2)Health (85) Ny fahasalaman'ny zaza (21) Ny fahasalaman'i Neny (15)Interesting (233)Beauty (33) Sakafo (8) Fashion (10)Fitiavana (20) Fifandraisana (20)Maternity (54) Pregnancy (15) Parenting (31)Online calculators (3)Hery (18) Ny fiterahana (2) Ny sakafo ara-pahasalamana ny mpitsabo mpanampy (2) Sakafo ara-pahasalamana mandritra ny herintaona ka hatramin'ny herintaona (13)Travel (4)Recipes (1 163) Fomba faharoa (638) Desserts (231) Ny dingana voalohany (288)Family and home (60) Life advice (Layfkahi) (37)Dream Interpreter (38)